मोनोकिनी सामन्यतया माथिल्लो भाग नभएको महिलाको स्तन देखिने गरी लगाउने पौडिपहिरन हो र आधुनिक मोनोकिनीमा अगाडि र पछाडीको भागमा कपडाको टुक्रा पनि जोडिएको हुन्छ ।यसले विकिनीको तलको भाग मात्रलाई पनि जनाउँदछ ।
मिनिस्कर्ट घुँडा भन्दा माथि,सामान्यतया तिघ्राको बिचसम्म वा पुट्ठा भन्दा लगभग १० सेमी सम्म मात्र आइपुग्ने स्कर्ट वा छोटोपहिरन हो । साथै माइक्रोस्कर्ट तिघ्राको माथिल्लो भाग वा कापको अलिक मात्र तल सम्म आइपुग्ने मिनिस्कर्ट हो ।
यो कुनै पनि वर्षको पात्रो हो जुन कुनै पनि मंगलबार सुरुहुने छोटो वर्ष को लागि मान्य हुन्छ जस्तै १९५२, १९८०, २००८, २०३६ or २०६४. अघिल्लो वर्ष | पछिल्लो वर्ष
इन्टरनेटमा कुरा कानि गर्न प्रयोग हुने साधनलाई मेसेन्जर भनिन्छ। यसमा प्राय आफैले लेखेर वा बोलेर कुराकानि गर्न सकिन्छ। मेसेन्जर धेरै प्रकारका हुन्छन्। केही लाई टेक्सट मेसेन्जर पनि भनिन्छ भने केही भिडीयो मेसेन्जर पनि हुन्छन्। यो एक अङ्ग्रेजी शब्द हो ...
गुहिल वंश मेदपाट क्षेत्रको शासक थिए । गुहिल वंशी राजाहरू सुरूवातमा गुर्जर प्रतिहार वंशको रजौटा को रूपमा ८औं देखि १०औं शताब्दी सम्म शासन गरे ।
चिमडी दह आजभन्दा ३३ वर्ष अगाडि प्राकृतिक रूपमा स्थापित भएको बर्जुताल मासिंदा स्थानीय जनताले भोगेको समस्याबाट जागरुक भई पुनः निर्माणको निम्ति स्थानीय जनताहरू लागि परेका छन। चिमडी दहको नामले समेत प्रशिद्ध यो तालको पुनः निर्माणले सुनसरी जिल्लाको दक् ...
कुल प्रजननदर एउटी महिलाले आफ्नो पुरै प्रजनन अबधि जन्माउने जम्मा जिवित शिशुहरूको संख्या हो। कुल प्रजननदर निकाल्दा प्रजनन उमेरमा प्रवेश गरेका सम्पुर्ण महिलाहरू प्रजनन अवधिभर जीबित रहि ती महिलाले समेत हाल अरु उमेरसमुहमा रहेका महिलाहरूले जतिनै आफ्नो ...
मम्मी एउटा संरक्षित शव लाई भन्छन जसको अङ्ग र छालालाई थाहा पाई वा नपाईकन कुनै विधिबाट संरक्षित गरिन्छ। संरक्षित गर्नको लागि उचित रसायनहरूको प्रयोग, अत्यन्त शीतल वातावरण, धेरै कम आर्द्रता, धेरै कम हावा आदिको प्रविधीमा गरिन्छ। अहिलेसम्म फेलापरेको सब ...
रूवीभ्याली गाउँपालिका काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको हिमाल ल्याल्दोरको आधार शिविर हो । यो रसुवा, धादिङ र गोरखाको उत्तरी भेगमा पर्दछ । दुर्लभ बहुमुल्य पत्थर रूबी पाइने भएकाले यसको नाम रूवीभ्याली राखिएको हो । साविकको लापा,सेर्तुङ र तिप्लिङ गाविसलाई सम ...
ढाँचा:Infobox Airline alliance स्टार अलायन्स संसारको सबैभन्दा ठूलो वैश्विक विमान सेवा प्रदायकहरूको गठबन्धन हो जसको मुख्यालय, फ्रैंकफर्ट एम मेन, जर्मनीमा रहेको छ। यसका वर्तमान सीईओ मार्क स्क्वाव हुन्। यसले आफ्नो नाम र प्रतिक पाँच संस्थापक हवाई सेव ...
कालो लोखर्के तिनीहरूका भुत्लामा कालो रङ्गको साथ लोखर्केहरूको मेलानिस्टिक उपसमूह हो। घटना लोखर्केका विभिन्न प्रजातिहरूको साथ देखा पर्दछ, यद्यपि यो पूर्वी खैरो लोखर्के र सियार लोखर्के को साथ प्राय: जसो हुन्छ। पूर्वी खैरो र सियार लोखर्केका कालो मोर् ...
मुख मैथुन:मुख, जिब्रो, ओँठ,दाँत आदि अङ्गहरूको सहायताबाट यौन साथीलाई यौन सन्तुष्टि दिनको लागि गरिने यौनकार्य कार्य हो । कामसूत्रमा ऋषि वात्सायनले पनि मुखमैथुनलाई विभिन्न आठ नाम दिई वर्गीकृत गरेका छन । ती नामहरू निमित्त, पाश्र्वतोदष्ट, बहिसन्देश, अ ...
लागन अनुमान भन्नाले कुनै पनि परियोजना, कार्य वा कार्यक्रमको अनुमानित खर्चको रकम हो । लागत अनुमानको तय लागत अनुमान तयारी प्रक्रिया तथा खरिद सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रहि गर्ने गरिन्छ । लागत अनुमानबाट कार्य वा परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर् ...
रौतहट नरसंहार वा राजपुर फरहदवा नरसंहार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मोहमद आफ्ताब आलमले वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभा चुनाव जित्न मच्चाएको बमकाण्डका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा निर्ममतापूर्वक जीवित पोलेर हत्या गरिएको भनिएको घटना हो । उक्त समयमा दबा ...